OS X တွင်မောက်စ်အမည်မည်သို့ပြောင်းရမည်နည်း ငါက Mac ပါ
OS X ထဲက mouse ကိုဘယ်လိုအမည်ပြောင်းမလဲ
Ignacio Sala | | Mac OS X ကို, လဲ tutorial
အကယ်၍ သင်သည် Windows မှ Mac သို့ပြောင်းလို။ Apple online store သို့သွားလျှင်သို့မဟုတ် Apple Store သို့သွားလိုလျှင်သေချာသည် စျေးနှုန်းတွေကိုမြင်တော့မင်းကဒါကိုတစ်ကြိမ်ထက်ပိုပြီးစဉ်းစားလိမ့်မယ်။ နှင့်နှစ်ခု။ Mac ကွန်ပြူတာများသည် Windows နှင့်စျေးကွက်တွင်တွေ့နိုင်သောမော်ဒယ်များနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်ပိုမိုစျေးကြီးသည်။ ဒါပေမယ့်သင်ကစိတ်ပိုင်းဖြတ်ထားမယ်ဆိုရင်သင်ဟာတစ်ပတ်ရစ် Mac ဝယ်ဖို့စိတ်ဝင်စားပါလိမ့်မယ်။
Mac ကွန်ပျူတာများသည်မည်သည့် Windows PC ထက်မဆိုသက်တမ်းပိုရှည်သည်။ နောက်ထပ်သွားစရာမလိုဘဲ ငါလက်ရှိအယ်လ် Capitan နှင့်အတူ 2010 ခုနှစ် Mac Mini ကိုအသုံးပြုသည်။ ကျွန်ုပ်၏ Mac Mini ရရှိသောတစ်ခုတည်းသော update မှာ SSD အတွက် hard drive လဲလှယ်ရေးစနစ်ဖြစ်သည်။ ဒီ solid hard drive အသစ်နှင့်အတူ mi အသစ်က Mac Mini သည်သုံးနှစ်မှလေးနှစ်အထိ ဆက်လက်၍ အလုပ်လုပ်နိုင်လိမ့်မည် စွမ်းဆောင်ရည်ဆိုင်ရာပြissuesနာများမရှိဘဲပိုပြီး။
အကယ်၍ သင်ဟာယခင်ပိုင်ရှင်ဖြစ်ခဲ့တာတွေအပေါ် မူတည်၍ mouse နှင့် keyboard ပါ ၀ င်သည့် second-hand Mac ကိုဝယ်လျှင်၊ mouse သည်ယခင်ပိုင်ရှင်၏အမည်ကိုသိမ်းဆည်းရန်ဖြစ်နိုင်သည်။ ၎င်းသည်လုံးဝအနှောင့်အယှက်မဖြစ်စေသည်မှာမှန်သော်လည်း၎င်းကိုယေဘူယျအမည်သို့မဟုတ်ကျွန်ုပ်တို့၏နာမည်သို့ပြောင်းလဲခြင်းသည်မနာကျင်ပါ။
OS X တွင် mouse ကိုအမည်ပြောင်းပါ
ဒီဟာကိုငါတို့သွားလိမ့်မယ် System ကို ဦး စားပေး.
System Preferences အတွင်း မှနေ၍ ကျွန်ုပ်တို့တက်လိမ့်မည် ဘလူးတုသ် ဒါ့အပြင် Device တွေအားလုံးကိုကျွန်ုပ်တို့၏ Mac နဲ့ချိတ်ဆက်ထားမှာဖြစ်ပါတယ်
ကြွက်ကိုတွေ့တော့ကိုယ့်ကိုကိုယ်တင်လိုက်ပါ လက်ျာခလုတ်ကိုနှင့်အတူကလစ်နှိပ်ပါ drop-down menu ကိုပြသရန်။
မီနူးတွင် ကျနော်တို့အမည်ပြောင်းကိုရွေးပါ ပြီးတော့ငါတို့မောက်စ်ကိုအခုမှစချင်တဲ့နာမည်ကိုမိတ်ဆက်ပေးတယ်။
ငါအရင်ကပြောခဲ့သလိုပါပဲ၊ Mac စက်တွေကအချိန်ကုန်သွားတာကြာပြီ operating system သည် Cupertino အခြေစိုက်ကုမ္ပဏီမှထုတ်လုပ်သောကွန်ပျူတာများအတွက်သာရည်ရွယ်သည်.
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ငါက Mac ကပါ » Apple » လဲ tutorial » OS X ထဲက mouse ကိုဘယ်လိုအမည်ပြောင်းမလဲ
PDFElement, PDF ဖိုင်များပြောင်းလဲသွားပြီ
Netflix ကိုစပိန်နိုင်ငံသို့ OS X El Capitan 10.11.1 ရောက်ရှိလာခြင်းသည်သင်၏ Mac ၏စွမ်းဆောင်ရည်ကိုပိုမိုကောင်းမွန်စေသည်။ ငါ Mac ထဲကနေတစ်ပတ်တာအကောင်းဆုံး